I-Zoomgu Full Cover Screen Screen yokutya eyiVachine Machine, China Zoomgu Full Cover Screen esempilweni Vachine Machine Machine abavelisi, abaxhasi, Factory - Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
I-Zoomgu Ikhusi elipheleleyo leScreen seVachine yokutya eseMpilweni
Oku umatshini wethu ilifti wokuthengisa. Ifanelekile kwiindawo ezinabantu abaninzi abathengisayo, iivenkile ezilula, okanye naphina apho umgangatho womgangatho uphambili.
Kungenxa yoko le nto siyile saza saphuhlisa indlela elula yokuphendula kwiimfuno zoluntu. Umatshini wethu wokudibanisa amandla aphezulu ukuvumela ukuba unikeze abathengi bakho ukhetho oluninzi lweemveliso kubathengi bakho bonwabile kwaye banelisekile.
Myalelo woomatshini bakho besiko leZoomgu namhlanje! Yiba ngowokuqala kolu shishino ukuba ubenabo oomatshini abathengisa umhlaba abasempilweni.
Ubungakanani: H: 1882 mm, W: 1163 mm, D: 911 mm
Ubungakanani: 300-800 iiPC
Umzekelo: ZG-D900-9C (55SP)
● Inkqubo yokuphakamisa inokuthengisa iimveliso ezibuthathaka.
● Ngelifti, unokuthengisa iimveliso eziethe-ethe, ukutya okutsha, njengeziselo kwiibhotile zeglasi / kwiitoti / kwiibhotile / kwiibhokisi / kwiphakheji ethambileyo- Polyurethane body foam & imported Embraco compressor.
● Inkqubo yokhuselo lokuvuza kwamandla iqinisekisa ukusebenza ngokukhuselekileyo koomatshini bakaZoomgu
● Ibhodi yokulawula isebenzisa uyilo lwe-3D kunye nokukhanya kwesalathi kusetyenziswa kwimingxunya yemali.
● Iqonga lamafu lixhasa ukujongwa kude kwedatha yoomatshini kunye nenqanaba lokusebenza.
● Kusetyenziswe imigangatho ye-MDB kunye ne-DEX, exhasa iipheripherithi ezisemgangathweni ezisemgangathweni.
Ngokungafaniyo kwiimodeli ezindala, kunye nengqekembe yokubuyisa ingqekembe yokugqibela yokuphelisa iqhosha.
* Ukususwa ngokulula kweyunithi yokupholisa ukugcinwa okanye ukulungiswa (iyunithi iphuma ngaphambili)
* Unowona msebenzisi ujongano olusebenzayo (lwenkqubo elula kunye notshintsho kuseto) amaxabiso njl
* Inkqubo ye-Dex yeetelemetry kunye neenkqubo zokuhlawula ngaphandle kwemali (iPaypass, intlawulo ye-Android, iTephu n go, njl.
* Inkqubo yokulahla inzwa yokuhanjiswa okuqinisekileyo okanye imali ebuyiswe ngokuzenzekelayo
* I-90 degree yokuvula umnyango wokugcwalisa ngokulula
Ukukhanya kwe-LED (okuqaqambe kakhulu)
* Umoya oluhlengahlengiso oluhle ngokutsala kunye nokujija (akukho mfuneko yokususa itreyi)
* Iphedi yamaqhosha yesitayile yamandla yokuqina kunye nokuthembeka
* Kweeshelfu Adjustable ukuze zilungele iimfuno zakho kunye neemveliso
I-Bill, ingqekembe, i-Coin Dispenser (i-MDB Protocol)
I-4-25 ° C (iyahlengahlengiswa)
Ngokwesiqhelo 45 W Ifriji 465 W
Wechat QR Pay, Ali QR Pay, ikhadi lobulungu / imisebenzi yokuhlawula ikhadi
Isikolo, ibhanki, iofisi, umzi-mveliso, ipaki, indlela engaphantsi isikhululo, isikhululo seenqwelomoya, ihotele, isibhedlele, Ivenkile yokuthenga njl.